Faah faahin:- Diyaaraddo dagaal oo duqeymo xoogan ku qaaday gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Diyaaraddo dagaal oo duqeymo xoogan ku qaaday gobolka Sh/hoose
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa diyaaraddo dagaal oo aan la aqoonin dalka laga leeyahay oo habeenkii xalay duqeymo aad u xoogan ku qaaday fariisimo ay Xarakada Al-shabaab ku leeyihiin deegaanka Toora-toorow ee gobolka Sh/hoose.
Duqeymahaasi oo aad u cuslaa ayaa sida la sheegay lala beegsaday fariisimaha ay ku sugnaayeen ciidanka Al-shabaab ee deegaanka Toora-toorow, waxayna duqeymahaasi socdeen muddo saacad ku dhawaad.
Sidoo kale, qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay inay habeenkii xalay maqlayeen dhowr madaafiic oo ku dhaceeysay deegaanka Toora-toorow, balse aysan si dhab ah u ogeyn qasaaraha uu geystay.
Ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay mas’uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan diyaaradahaan aan la aqoonin oo duqeymaha xoogan ka geystay deegaanka Toora-toorow ee gobolka Sh/hoose.
Dhinaca kale, saraakiisha Al-shabaab weli wax hadal ah kama aysan soo saarin duqeymahaan la sheegay in lagu qaaday fariisimo ay ciidamadooda ku leeyihiin deegaanka Toora-toorow ee gobolka Sh/hoose.
Si kastaba ha ahaatee, diyaaradaha dagaalka ayaa inta badan duqeymo xoogan ka geysta deegaano ku yaala gobolka Sh/hoose, halkaas oo la sheegay inay xarumo waaweyn ku leeyihiin dagaalyahanadda Xarakada Al-shabaab.